Dowladaha Soomaaliya iyo Venezuela oo yeelanaya iskaashi dheef-wadaag ah !
Saturday January 15, 2022 - 08:43:53 in News by Xaaji Faysal
Labada Wasiir ayaa wada-hadalkooda diiradda ku saaray sidii
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah, Mudane Cabdisaciid Muuse Cali ayaa khadka telefoonka wada hadal kula yeeshay dhiggiisa Arrimaha Dibadda ee Dalka Venezuela Mudane Felix Plasencia, iyaga oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka Labada Dal.
Labada Wasiir ayaa wada-hadalkooda diiradda ku saaray sidii ay Labada Dal u yeelan lahaayeen iskaashi dheef-wadaag ah oo taabanaya dhinacyada dhaqaalaha, maalgashiga, diblomaasiyadda iyo ganacsiga.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa Dhiggiisa Venezuela la wadaagay fursadaha dhaqaale iyo maalgashi ee ka jira Soomaaliya iyo sida ay uga go’an in ay Labada Dowladood yeeshaan xiriir qotadheer oo ku qotoma danaha Labada Shacab iyo Labada Qaran ee Soomaaliya iyo Venezuela.
Dowlada Venezuela ayaa sanadihii ugu dambeeyay wajaheysay qalalaaase siyaasadeed oo xoogan, waxaa sidoo kale dalkaasi oo mar qani ahaa mudooyinkii ugu dambeeyay ka jiray xaalad adag oo dhinaca nolosha ah kadib cunaqabteyno la saaray.